Igwe friza → Uwe ụlọ ahịa oyi • Ihe mkpuchi kọmputa P&M
Igwe friza bụ akụkụ dị oke mkpa nke akụrụngwa maka friza na ụlọ ahịa oyi. A na-ekpughere aka mgbe niile na kọntaktị na ngwaahịa na akụrụngwa. Ha na-adakarị n'okpuru ntu oyi n'ihi ebe ekpughere ya na omume nke obere okpomọkụ, ifufe na-enwekarị oke iru mmiri. Frostbite na-amalitekarị na ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara, n’ihi na a na-eme ka mgbasa ọbara na-ekpo ọkụ iji kpoo akụkụ ndị ahụ jụrụ oyi. Ihe mgbaàmà ndị ọzọ bụ ihe mgbu, ọkọ, na mmetụ ọzịza aka. Ogo nke ntu oyi na-adabere na oge na ọnọdụ,
nke ekpughere akpụkpọ ahụ na mmetụta na-adịghị mma nke obere okpomọkụ. Uwe aka bụ nchebe zuru oke megide obere okpomọkụ, na-enye gị ohere ịrụ ọrụ gị kpamkpam. Uwe aka friza ngwaahịa dị elu na-enye gị ohere ichebe aka gị site na ntu oyi, ọ bụ ya mere ụlọ ahịa anyị ji enye naanị ngwaahịa dị elu sitere na ndị nrụpụta akwadoro.
POLAR RANGE COLDSTORE hụrụ gloves maka oyi na nchekwa oyi
Uwe maka friza na ime ụlọ oyi TG2 XTREME COLDSTORE GLOVES
Nhọrọ dị iche iche nke ndị ọkachamara ọkachamara na-eme ka ndị ahịa dị njikere ịzụta ngwaahịa ọ bụghị naanị uwe aka, kamakwa ụdị uwe niile maka friza na ụlọ ahịa oyi, na-ahọrọ eriri afọ, Jaketị ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ. Uwe a na-acho ugbua na-acha uhie uhie bụ ngwaahịa nke na-agbaso ụkpụrụ EN388. Mkpụrụ mmanụ oroma TG1 Pro Coldstore bụ ngwaahịa nwere akwa Thinsulate. Ihe nlere nke gloctic Gold Coldstore gloves ma ọ bụ Eisbaer Freezer gloves nke na-egbo mkpa nke EN 511 / EN 388 - ndị a bụ ngwaahịa ahọpụtara site na onyinye anyị. Akọwawo ụdị ụdị uwe niile dị iche iche iji mee ka nhọrọ dị mfe dị ka o kwere mee.
Ndị na-agba ịnyịnya na-agba ajị anụ
Ọnụahịa na-adọrọ adọrọ na ịdị mma dị elu
Companylọ ọrụ anyị na-enye ụlọ ọrụ nhazi, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ahịa oyi, ụlọ ọrụ lọjistik, nke a bụkwa ihe na-emepụta nnukwu iwu ngwaahịa. N'ihi nke a, anyị nwere ike ịrụ ọrụ ego mara mma na ndị na-emepụta anyị, na-ebute ọnụ ahịa asọmpi maka ndị ahịa. Na mgbakwunye odi nma nke ngwaahịa na-eme ka ọtụtụ ndị ahịa nwere afọ ojuju laghachikwute anyị, nke a na-enye anyị ohere idobe ọnụ ahịa nzụta n'aka ndị ọrụ anyị na ọkwa dị ala.
Maka imirikiti uwe na textiles, anyị nwere ike itinye akara na eserese ọ bụla, anyị na-eme akara ngosi site na iji usoro ihe mkpuchi kọmputa ma ọ bụ ihuenyo ebi akwụkwọ. Anyị nwere ogige igwe nke anyị, nke na-enye anyị ohere ịgbaso usoro akara na ọkwa ọ bụla.
Uwe maka friza na ime ụlọ oyi TG1 PRO COLDSTORE
nnukwu efere maka ụlọ ahịa oyi na frizauwe nchebefriji uweAka na Coldstoreuwe maka obere okpomọkụGold ifriizi uweIgwe nju oyiUwe aka ajị anụUwe ụlọ ahịa oyiuwe aka na-ekpo ọkụ